समाज – Sudur Sanchar
Jan232022 by Bibek PoudelNo Comments
काठमाडौं, । उफ महँगी’ । लामो स्वास लिँदै फूलमाया तामाङ भन्छिन्, ‘कसरी बालबच्चा पाल्ने? कसरी आफू बाँच्ने? सारै गाह्रो भयो ।’ अनामनगरमा कोठा भाडामा लिएर बसेकी फूलमायाले प्रत्येक महिना कोठा भाडाबापत ७ हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ फूलमाया अरूको घरमा भाडा माझ्ने र लुगा धोएर छोरा छोरी पाल्ने गर्छिन् । ‘महिनामा १०÷१५ हजार रुपैयाँ कमाइ हुँदा पहिला त खान पुग्थ्यो । अहिले त महिनाभरि खानै पुग्दैन,’ उनले भनिन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि बच्चालाई कसरी पाल्ने, घरको चुलो कसरी बाल्ने चिन्ता बढेको छ उनलाई । दुःखेसो पोख्दै तामाङ भन्छिन्, ‘बजारमा सामान किन्न जाँदा छोइसक्नु छैन महँगीले ।’ ‘बजारमा एक किलो चिनीको १ सय रुपैयाँ पर्छ, तेल, दाल, चामल, गेडागुडी सबै उतिकै महँगो छ । कसरी किनेर खाने?’ फूलमायाले भनिन्, चिसो छ तर चिनी महँगो भएकाले घरमा चिया पकाउन छोडिसकेकी छु । कमाइले नधाने
नमस्कार गरे सरकार म किसानको छोरो अन्न्याय र भ्रष्टचारको बिरोधि यो मोरो गणतन्त्र लोकतन्त्र सबै आयो भन्छन किन सबै आए पनि जनता दुखी बन्छन झुक्न थाल्यो नेपालको चन्द्र सुर्य झण्डा काहा पुग्यो निर्मलाको निर्मम हत्याकाण्ड निर्मलाको बा आमा त रुदै छन रे अहिले बलात्कारि दोषीलाइ चाही कार्बाही गर्ने कहिले ३३ किलो सुन काण्ड काहा गै पच्यो मिलाउन जाल जेल खोइ कस्ले रच्यो ठुला माच्छा बस्या छन उसको आफ्नो कुरैमा साना माच्छा परेछन रे हेर्नुस अब खोरैमा ठुला ठुला भ्रष्टाचार लुकाउछन भित्रै बाडफाड हुन्छ क्यारे मान्न थाल्छन मित्रै औषधि र खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार गर्छन सोझा जनता सडकमा भोक भोकै मर्छन उता हेरौ भारतले मिसा पनि मिचे बल्ल तल्ल सरकारले नक्सा भनी खिचे बरु रगत बगाउन तयार छौ उठ जनता अब त एक हौ देखावटी नक्सा आयो भुमि पनि आओस शान्ती र समृद्धि बिकास पनि छाओस ।।। ल
काठमाडौँ । को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) को चौतर्फी स’ङ्क्रमण बढेसँगै सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कोरोना स’ङ्क्रमणबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरतमध्ये एक हजार ७२१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको काममा सुरक्षाकर्मीहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिँदै आएका छन् । चारवटा सुरक्षा निकायमध्ये पहिलो पङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीमा सबैभन्दा बढी ९५५ जनामा कोरोना स’ङ्क्रमण देखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये ६० जनालाई विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र सङ्क्रमितहरूमा जटिल स्वास्थ्य समस्या भने नदेखिएको जानकारी
Jan222022 by Bibek PoudelNo Comments
नेपालमा काेराेनाका सं’क्रमणबाट एकै दिन १६ जनाकाे ज्या’न गयाे,
काठमाण्डाै ; कोरोना संक्रमणबाट थप १६ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण १६ जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६ सय ५१ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार दुई सय ५४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन गरी २० हजार एक सय ८७ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ५० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात १० हजार दुई सय ५४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा सात सय आठ जना निको भएका छन् । यो सहित कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या आठ लाख २० हजार दुई सय ८३ जना पुगेको छ । अहिले नेपालमा ७२ हजार आठ सय ६२ जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा एक लाख ९
चार वर्षअघि स्थानीय तहको चुनाव भयो। जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ-गाउँमा डोजरको संख्या बढ्यो। डोजरले खोस्रेर बाटो बनाए। बाटोसँगै ‘विकास’ गाउँ पस्यो। बहुराष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका सामान बोकेर गाडीहरू गाउँ पुगे। गाउँ जाँदा गह्रुंगा भएर जाने गाडी फर्किँदा रित्तै हुन्छन्। देशका धेरै गाउँमा अहिले पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले भने यो दृश्य बदलिदिएका छन्। बाहिरको सामान बोकेर आफ्नो गाउँपालिकामा आउने गाडी उनले अचेल कागती भरेर पठाउन थालेका छन्। त्यो कागती उनले आफैं फलाएका हुन्। २०७४ मा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि राईले आफ्नो साढे सात रोपनी जग्गामा कागती खेती सुरू गरेका थिए। कागती खेती गर्नुअघि उक्त खेतमा मुस्किलले १२ मुरी धान फल्थ्यो। उनको परिवारले खेत अधियाँ दिएको थियो। दु:ख गरेजति उब्जनी नहुने भएपछि अधियाँ
वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा एकैदिन ९ जना संक्र’मितको मृ’त्यु !
काठमाडौं । महामारीको तेस्रो लहर सुरु मात्रै भएको छैन एक्टि'भ संकृ'मितको संख्या २० दिनमा बढेर ६५ हजारमाथि पुगेको छ । तर, सघन उपचार कक्ष आइसियु र भेन्टि'लेटरमा पुग्नेहरु बढेका छैनन् । उता सरकारी तथ्यांकले मृ'त्युभएको संख्या पनि बढेको देखाएको छैन । दैनिक ३ देखि ४ जनाको मृ'त्यु भइरहेको छ । अधिकारीहरुले बताए अनुसार अहिले मृ'त्युको संख्या सरकारले लुकाएको छ । ओमि'क्रोन बढेसंगै मृ'त्यु बढेको अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । शुक्रबार २४ घण्टाको अबधिमा ९ जना संकृ'मितको मृ'त्यु भएको बुझिएको छ । नेपाली सेना अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले स्वास्थ्य लाइभसँग ९ जनाको मृ'त्यु भएको बताए । उनीहरु सबै बृद्धबृद्धा र दी'र्घराेगी हुन् । मृ'त्युपछि परीक्षण गर्दा को राेना पु'ष्टि भएको चिकित्सकले भनाइ छ । उता पर्सामा पनि ओमिक्रोनले एक जनाको मृ'त्यु भएको खबर आएको छ । यी तथ्यांक सरकारी सिस्टममा समावेश भ
Jan212022 by Bibek PoudelNo Comments
धरमपानीस्थित बाक्सेमा भएको जीप दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु’ पुरा गाउँ अझै पनि शोकमा
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ धरमपानीस्थित बाक्सेमा भएको जीप दु’र्घटना’ले गाउँ शो’क’मा डु’बे’को छ । साराङघाटबाट धरमपानी भित्री सडकखण्डमा बाक्सेतर्फबाट धरमपानी जाँदै गरेको ग१ज ६५५५ नम्बरको जीप दु’र्घटना’मा छ जनाको मृ’त्यु भएपछि बन्दीपुर शो’क’मा डु’बे’को हो । माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अघिल्लो दिन भएको दु’र्घटना’ले सबैलाई दु’खित तुल्याए’को गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले बताउनुभयो म“चाडपर्वका बेला भएको दु’र्घटना’ले बाक्से, हटिया मात्र नभई सिङ्गो पालिका शो’क’मा डु’बे’को छ उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष थापाका अनुसार आँबुखैरेनीको घु’माउने’बाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै बन्दीपुरतर्फ गुडेको जी’प हटिया गाउँ आइपुग्नुभन्दा केही नजिक उकालो’बाट व्याक भएर खसेको थियो । जीपको स्टार्ट ब’न्द भएर पुनःस्टार्ट गर्न खोज्दा पछाडि हटेपछि जीप दु’र्घट’ना भएको उहाँले बताउनुभयो चालक सिकारु रहेको बुझिन आएको
Jan202022 by Bibek PoudelNo Comments
अन्ततः देवरले भाउजूलाई छो’ड्ने नै भए, देवरले छु’ट्टिन्छू भन्दा भाउजु रोइन् ।
केही समय अघिदेखि झापाको झिलझिले घर भएका चन्द्र मगर आफ्नै भाउजू लि एर फ’रार भएको घ’टना निकै च’र्चामा छ । श्रीमती वैदेशिक रोजगारिमा गएको बेला भाउजि’सगँ रं’ गेहा’त फे’ला परेका चन्द्र भोलिपल्ट गाउँमा उनिहरुको ह’ल्ला चले पछि भाउजू सहित फ रार भएका थिए । चन्द्रकी एक छोरी छिन भने उनिसगैँ फ रार भएकी भाउजुका पनि छोराछोरी रहेका छन । भाउजुका श्रीमान भने ईन्डिया कामको शिलशिलामा आउने जाने गरेको स्थानियको भनाई छ । उनिहरु फ’रार भए पछि छोरिको बि च’ल्नी भएक भन्दै चन्द्रकी श्रीमती बिदेशबाट घर फर्किएर चन्द्रको खोजी गरेकी थिइन् । उनिहरु सम्पर्कमा आए पछि स्थिति केही बि’बा’दित तथा केही हा त’पा त पनि भएको थियो ।
Jan192022 by Bibek PoudelNo Comments
प्रहरीमाथि लुटेरा समूहको आ’क्र’मण : असई घाइते, टाउकोमा १२ टाँका लगाइयो
जनकपुरधाम । धनुषाको बटेश्वरमा गाउँपालिका–४ मा लुटेरा समूहले प्रहरीमाथि आ’क्रमण गरेको छ । मंगलबार राति असई मनोज पोखरेलमाथि लु’टे’रा समूहले आ’क्र’म’ण ग’रे’का हुन् ।धनुषाका एसपी वसन्त रजौरेका अनुसार आ’क्र’मणबाट असई पोखरेल घाइते छन् । उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगिएका पोखरेलको टाउकोमा १२ वटा टाँका लागेको छ । भारतबाट फर्केर ससुराली बटेश्वर जाने क्रममा लुटेरा समूहले महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका ७ का अमित पासमानलाई लु’टपा’ट ग’रे’का थिए । घटनास्थल पुगेर सं’ल’ग्नहरूलाई पक्राउ गर्न खोज्दा असई पोखरेलमाथि आ’क्र’मण भएको बताइएको छ ।लु’टपा’ट गर्ने व्यक्तिलाई पक्रेर ल्याउने क्रममा घेरेर केही व्यक्तिले असई पोखरेलमाथि आ’क्र’मण गरेको एसपी रजौरले बताए । घटनामा संलग्न ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।काठमाडौंको बानेश्वरस्थित कान्तिपुर इन्टरन
माघ बाटै विद्यालय खोल्ने सीसीएमसीसीको निर्णय ,यस्तो छ विद्यार्थीलाई तयारी !
काठमाडौं : माघ १६ गतेदेखि २० गतेसम्म को-भिड विरु’द्धको खोप लगाउने प्रयोजनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा को-भिड १९ रोक्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि बीच गृह मन्त्रालयमा मंगलवार भएको बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले त्यो समयमा विद्यालयमा खोप अभियान नै चलाइने जानकारी दिए । विश्वविद्यालय स्तरमा चलिरहेका र मिति निश्चित भएका परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। को-भिड सं’क्रमण भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरेर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यो सर्कुलर भने सम्बन्धित मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा गर्नेछ । बैठकले हवाईजहाजमा यात्रा गर्नेलाई टिक
७.	गौतमबुद्ध विमानस्थलको उडान तोकियो, मलेसिया र खाडीका यी देशबाट नियमित उडान हुने ! (80)